Keilor Heights Sekondari - DzeBonde | KUSVIRA
Keilor Heights Sekondari - DzeBonde
Iyi gem diki yakavezwa mifananidzo mudzidzi mune gore 9 kirasi paKeilor Heights sekondari koreji muVictoria, Australia. Ichi chiitiko kune vadzidzi kuti vape tsika dzakachengeteka & dzisina kuchengetedzeka dzeBonde. Wona maitiro “ekugovana zvinhu akaiswa mukati meanosi kana vagazi” maitiro. Vadzidzisi vanonzwa kuti vane kodzero yekukurukura zviito izvi nevana vedu mukirasi. Sevabereki, isu hativapi kodzero iyoyo.